Colace vs. Dulcolax: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည့်အရာ - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | မေ 2022
ကျန်းမာရေး ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် သတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ပြင်းထန်သောအားကစား ကျန်းမာရေးပညာရေး ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေး ရပ်ရွာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ဆီးဂိမ်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Colace vs. Dulcolax: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည့်အရာ
Colace နှင့် Dulcolax တို့သည်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုကုသရာတွင်အထောက်အကူပြုသောဆေးညွှန်း ၂ ခု (OTC) ဆေးများဖြစ်သည်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းအခြေအနေ၊ တစ်ပတ်တွင်အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုသုံးခုသို့မဟုတ်နည်းပါးခြင်း၊ ခဲယဉ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖုန်ခြင်း၊ မစင်များ၊ သွားရန်ခက်ခဲသောထိုင်ခုံများ၊ အူသိမ်အလေ့အကျင့်သည်လူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားသည်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုခံစားရသည့်လူနာများသည်အူသိမ်အတွင်းဖောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖိခြင်းခံစားချက်များကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
ဝမ်းချုပ်ခြင်းမှာအများအားဖြင့်ဖြစ်ပြီးကလေးငယ်များ၊ ကလေးများနှင့်လူကြီးများကိုပါအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အမေရိကန် ၁၀၀ လျှင် ၁၆ ယောက် ဝမ်းချုပ်တာကိုခံစားရတယ်။ ဝမ်းချုပ်တာကိုပိုခံစားရလေ့ရှိတဲ့လူနာတချို့လည်းရှိတယ်။ ၎င်းတို့တွင်သက်ကြီးရွယ်အိုလူကြီးများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ကော့ကေးဆပ်မဟုတ်သူများ၊ ဖိုင်ဘာအနိမ့်စားသောအစားအစာကိုစားသောလူနာများနှင့်အခြားဆေးဝါးအချို့တို့ပါဝင်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် Colace နှင့် Dulcolax တို့ကိုသာနှိုင်းယှဉ်နိုင်သော်လည်း၊ တန်ပြန်ဆေးရည်များများစွာရှိသည်။ မည်သည့်ယုတ်ညံ့သည့်ဆေးသည်သင့်အတွက်သင့်လျော်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ် ဦး ၏ကျန်းမာရေးအကြံဥာဏ်ကိုရှာဖွေပါ။
Colace နှင့် Dulcolax အကြားအဓိကကွာခြားချက်များကဘာလဲ။
Colace (docusate ဆိုဒီယမ်) သည်ဝမ်းချုပ်ခြင်း၏လက္ခဏာများကိုကုသရန်နှင့်သက်သာစေရန်အတွက်အလွန်ဆေးကြောထားသောဆေးဖြစ်သည်။ Colace သည် surfactant တစ်ခုအနေဖြင့်ပြုမူပြီးမစင်ရှိရေနှင့်ရေမျက်နှာပြင်တင်းမာမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည် lipoid နှင့်အစိုဓာတ်ကိုမစင်ထဲသို့ဝင်ရန်ခွင့်ပြုပေးပြီးအူလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာရွေ့လျားနိုင်သည့်ပျော့ပြောင်းသောမစင်ကိုထုတ်လုပ်သည်။ Colace သည်ထိုင်ခုံပျော့ဆေးအဖြစ်ခွဲခြားထားသော်လည်း၎င်းသည်ရွေ့လျားမှုကိုတိုက်ရိုက်လှုံ့ဆော်မပေးသောကြောင့်ပျော့ပျောင်းသောဆေးဟုမယူမှတ်ပါ။ ထိုင်ခုံပျော့ပျောင်းလာရန်အတွက်တစ်ရက်မှသုံးရက်ကြာသောကြောင့် Colace သည်ဝမ်းချုပ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုမြန်မြန်သက်သာစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Colace (အဘယ်အရာကို Colace?) ကို 50 mg နှင့် 100 mg ပါးစပ်အော့ဖ်ဂယ်ဆေးတောင့်များနှင့် ၁၀ မီလီဂရမ် / ml နှင့် 60 mg / 15ml ပါးစပ်ဖြေရှင်းချက်များတွင်ရနိုင်သည်။ Colcer ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်ဂလိုက်cerin suppositories နှင့်မစင်ဆေးပျော့ပြောင်းခြင်းနှင့်နွေးနွေးထွေးထွေးစေသည့်ပေါင်းစပ်ခြင်းများလည်းရှိသည်။
Colace စျေးနှုန်းသတိပေးချက်များကို sign up လုပ်ပါနှင့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသည့်အခါထွက်ရှာ!
Dulcolax (bisacodyl EC) သည်ဝမ်းချုပ်ခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရန်နှင့်သက်သာစေရန်အတွက်ဆေးညွှန်းမပါသောဆေးဖြစ်သည်။ Dulcolax သည်နို့တိုက်သတ္တဝါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအူသိမ်၏အမြှေးပါးကိုထိခိုက်စေသည့် Peristaltic လှုပ်ရှားမှုကိုတိုက်ရိုက်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဤသည်လှုံ့ဆော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေစာမှတဆင့်မစင်လှုံ့ဆော်ပေး။ Dulcolax သည်လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို Colace ထက်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာထုတ်လုပ်သည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ၈-၁၂ နာရီအတွင်းပါးစပ်ဖြင့်သောက်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။ Dulcolax (Dulcolax ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း) ကို enteric-coated5mg နှင့် 10 mg tablet များနှင့် 10mg rectal suppository တို့တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ထိုင်ခုံပျော့ဆေးနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ Dulcolax ကုန်သွယ်ရေးနာမည်အောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါ။
မူးယစ်ဆေးအတန်း ထိုင်ခုံပျော့ပျောင်း စိတ်ကြွဆေး
ယေဘုယျနာမည်ကဘာလဲ? ဆိုဒီယမ်ကိုအာရုံစိုက်ပါ Bisacodyl EC
မည်သည့်ပုံစံ (များ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထဲသို့ဝင်သနည်း။ ခံတွင်း softgel, ပါးစပ်ဖြေရှင်းချက် ခံတွင်း enteric-coated တက်ဘလက်များ, rectal suppository
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? ၁၀၀ မီလီဂရမ် softgel တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်၊ တစ်နေ့လျှင်အများဆုံး ၃၀၀ မီလီဂရမ်ရှိသည် တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၀ မီလီဂရမ်သောက်ဆေးတစ်ပတ်လျှင် ၃ ရက်အများဆုံး
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူမှညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါကတစ်ပတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူမှညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါကတစ်ပတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည်
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ ကလေးများ2နှစ်နှင့်အထက်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အသက် ၆ နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများ၊ လူကြီးများ
Colace နှင့် Dulcolax မှကုသသောအခြေအနေများ
Colace သည်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုကုသခြင်းနှင့်၎င်းအားကာကွယ်ခြင်းနှစ်ခုလုံးတွင်ဖော်ပြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုတစ်ပတ်အတွင်းဖြေရှင်းသင့်သည်။ Colace သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ် ဦး ၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်အခြားဆေးဝါးများနှင့်ချုပ်နှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ချုပ်နှောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခြေအနေများကိုကာကွယ်ရန်ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
Dulcolax သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကုသခြင်းကိုသာရည်ညွှန်းသည်။ လှုပ်ရှားမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်၎င်း၏ယန္တရားသည်အချို့သောအဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူမှညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါက၎င်းကိုတစ်ပတ်အထိသာအသုံးပြုသင့်သည်။
အခြေအနေ မုန့် Dulcolax
ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
ဝမ်းချုပ်ခြင်း၏ကုသမှု ဟုတ်တယ် ဟုတ်သည် (ရံဖန်ရံခါ)
Colace သို့မဟုတ် Dulcolax သည်ပိုမိုထိရောက်သလား။
Colace နှင့် Dulcolax ရှိတက်ကြွစေသည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုချုပ်နှောင်ခြင်းကိုကုသရာတွင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းစမ်းသပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိသေးပါ။
သင့်အတွက်မှန်ကန်သောအရာကိုရွေးချယ်သည့်အခါမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုချင်းစီနှင့် ပတ်သက်၍ သတိရသင့်သည့်အချက်များစွာရှိသည်။ အချက်တစ်ချက်မှာသင်သည်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကိုမည်မျှလျင်မြန်စွာမျှော်လင့်နိုင်မည်နည်း။ Dulcolax ၏ suppositories များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းအလုပ်လုပ်သော်လည်းအချို့သောအဆင်မပြေမှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။ Dulcolax တက်ဘလက်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၈ နာရီမှ ၁၂ နာရီအတွင်းတစ်ညလုံးသက်သာစေသည်။ Colace အူသိမ်အူမလှုပ်ရှားမှုကိုထုတ်လုပ်ရန် ၁ ရက်မှ ၃ ရက်ခန့်ကြာနိုင်သည်။
ဆေးညွှန်းပုံစံသည်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ အချို့သောလူနာများအတွက် rectal suppository ကိုထည့်ခြင်းသည်သူတို့မတ်တတ်ရပ်ခြင်းထက် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ suppositories လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်နေစဉ်, လူနာပါးစပ်သောက်သုံးသောပုံစံကိုယူပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာပညာရှင်တစ် ဦး တည်းသာသင့်အတွက်မှန်ကန်ရာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဆရာ ၀ န်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲ Colace နှင့် Dulcolax ကိုတစ်ပါတ်ကျော်မသောက်သင့်ပါ။
Colul နှင့် Dulcolax တို့၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုများ
Colace သည်အများအားဖြင့်စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ် Medicare မူးယစ်ဆေးဝါးအာမခံအစီအစဉ်များတွင်မပါ ၀ င်သောဆေးများမသောက်ရသည့်ဆေးဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် Colace တစ်ပုလင်းသည်ဒေါ်လာ ၁၅ ဒေါ်လာကျသင့်သည်။ သင့်မှာဆေးညွှန်းတစ်ခုရထားတယ်ဆိုရင် SingleCare ကကူပွန်ကိုဒေါ်လာ ၄.၂၆ နဲ့အနည်းဆုံးပေးရမယ်။
Dulcolax သည်ဆေးဝါးကုသမှုသို့မဟုတ် Medicare မူးယစ်ဆေးဝါးအာမခံအစီအစဉ်များတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်မပါ ၀ င်သောဆေးမကုရသည့်ဆေးဖြစ်သည်။ Dulcolax suppositories of 12 count box ရဲ့ပျမ်းမျှလက်လီစျေးနှုန်းက ၁၂ ဒေါ်လာနီးပါးရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံမှဆေးညွှန်းကိုရရှိပါကသင်သည် SingleCare ထံမှဒေါ်လာ ၆.၁၀ သာပေးဆောင်ရပါမည်။
စံသောက်သုံးသော 100, 100 မီလီဂရမ် softgels 12, 10 မီလီဂရမ် suppositories
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 4- $ 14 $ 5- $ 15
Colace vs. Dulcolax ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Colace နှင့်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ။ နူးညံ့သောအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းကြွက်တက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ မြင့်မားသောဆေးများနှင့် / သို့မဟုတ်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၀ မ်းလျှောရောဂါနှင့်ချောင်မစင်များဖြစ်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်နှုန်း diluted လျှင်အရည်ပြင်ဆင်မှုလည်ချောင်း၏နံရံမှယားယံစေနိုင်သည်။
Dulcolax သည်ပုံမှန်ဆေးများသောက်ချိန်၌သာမန်ဆေးများသောက်သောအခါအူသိမ်အူမအရင့်ဖြစ်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရေရှည်အသုံးပြုသော Dulcolax သည်ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်အရည်နှင့်လျှပ်စစ်ဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့် hypokalemia (ပိုတက်စီယမ်အဆင့်နိမ့်) ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်မှီခိုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးဆေးကိုရပ်တန့်လိုက်သည့်အခါခဏခဏပြန်ထွက်လာနိုင်သည်။
ဤစာရင်းတွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအားလုံးမပါ ၀ င်ပါ။ ပြည့်စုံသောစာရင်းအတွက်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
အူလမ်းကြောင်းကြွက်တက် ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား
ဝမ်းလျှောခြင်း ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား
မော မဟုတ်ဘူး N / A ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား
ပျို့ချင်သည် မဟုတ်ဘူး N / A ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား
အော့ မဟုတ်ဘူး N / A ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား
Electrolyte တွေမညီမျှမှု မဟုတ်ဘူး N / A ဟုတ်တယ် သတ်မှတ်မထား
ရင်းမြစ်: Colace ( မင်းကွန်း ) Dulcolax ( မင်းကွန်း )
Colul နှင့် Dulcolax တို့၏ဆေးဝါးဆက်ဆံမှု
Colace နှင့် Dulcolax တို့ကို Furosemide သို့မဟုတ် torsemide ကဲ့သို့သော loop Diuretics ဆီးသွားသောလူနာများကိုသတိထားအသုံးပြုသင့်သည်။ ဤရွေ့ကား diuretics ဆီးပိုတက်စီယမ်ဖြုန်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, Colace သို့မဟုတ် Dulcolax ယူသည့်အခါဝမ်းလျှောကနေဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအလားအလာရှိသော Electrolyte တွေမညီမျှမှုနှင့်အတူပိုတက်စီယမ်ဆုံးရှုံးမှု hypokalemia ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Colace သည်ဓာတ်သတ္တုရေနံကိုမသုံးသင့်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်တွင်းထွက်ဆီများကိုစနစ်တကျစုပ်ယူနိုင်မှုကိုတိုးစေသည်။ ဤနေရာများရှိအဆီဓာတ်သိုက်များမှအူ၊ အသည်း၊ သရက်ရွက်နှင့် Lymph node များရောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။
Dulcolax သည်အူမကြီးအင်္ဂတေဖြစ်ပြီးဖျက်သိမ်းမှုကိုနှောင့်နှေးစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Dulcolax ကို antacids, H2 blockers နှင့် proton inhibitors များဖြင့်သောက်ခြင်းသည်အူအတွင်းရှိအဖုံးများသည်အစာအိမ်ကိုယားယံခြင်း (သို့) dyspepsia သို့ ဦး တည်သွားစေနိုင်သည်။ Dulcolax သည်အနည်းဆုံးတစ်နာရီခန့်ကြာအောင်ဤဆေးဝါးများနှင့်ဝေးကွာနေသင့်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း မုန့် Dulcolax
ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ် ပacိဇီဝဆေး မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Diphenoxylate ဝမ်းရောဂါ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Hydrocodone Opiate နာကျင်မှုသက်သာရာ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Nizatidine H2 blockers မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
မင်္ဂလာပါ Loop diuretics ဆီး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ဓာတ်သတ္တုရေနံ နို့ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Lansoprazole ပရိုတွန် pump pump မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Colace နှင့် Dulcolax ၏သတိပေးချက်များ
အကယ်၍ သင်ပျို့ချင်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းသို့မဟုတ်အစာအိမ်နာကျင်ခြင်းခံစားရပါက Colace သို့မဟုတ် Dulcolax မသုံးစွဲမီသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။ အူသိမ်အူမလှုပ်ရှားမှုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လျှင်နှစ်ပတ်ကျော်ကြာသည့်တိုင်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်လည်းတိုင်ပင်သင့်သည်။
Dulcolax သောက်နေစဉ်ကြွက်တက်ခြင်း၊ Dulcolax ဆေးပြားများကိုကြိတ်ခွဲခြင်းသို့မဟုတ်ဝါးခြင်းမပြုပါနှင့် Dulcolax ကို antacids သို့မဟုတ်နို့တစ်နာရီအတွင်းမသောက်ပါနှင့်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အူသိမ်အူမလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ် Dulcolax ကိုသောက်ပြီးနောက်မှစ။ သွေးထွက်ခြင်းသွေးဆောင်ခြင်းကြုံတွေ့ရပါက၊
Colace vs. Dulcolax နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Colace သည်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသရာတွင်အသုံးပြုသောဆေးမင်ကြောင်ပျော့ဆေးရည်ဖြစ်သည်။ Colace ကို 50 mg နှင့် 100 mg оозပါးဆော့ဖ်ဝဲဆေးတောင့်များနှင့် ၁၀ မီလီဂရမ် / ml နှင့် 60 mg / 15ml ပါးစပ်ဖြေရှင်းချက်များတွင်ရရှိနိုင်သည်။
Dulcolax သည်တစ်ခါတစ်ရံချုပ်နှောင်ခြင်းကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောနှိုးဆွပေးသောဆေးဖြစ်သည်။ Dulcolax ကို enteric-coated5mg နှင့် 10 mg တက်ဘလက်များနှင့် 10mg rectal suppository တို့တွင်ရရှိနိုင်သည်။
Colace နှင့် Dulcolax အတူတူလား။
Colace နှင့် Dulcolax နှစ်ခုလုံးသည်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုကြသော်လည်း၎င်းတို့သည်အတူတူမဟုတ်ဘဲအတူတူပင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ Colace သည်ထိုင်ခုံပျော့ပျောင်းစေရန်လွယ်ကူအောင်သွားရန်လွယ်ကူစေသည်။ Dulcolax သည်လှုံ့ဆော်ပေးသောအားလျော့စေသောဆေးဖြစ်သည်၊ အစာခြေလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်ထိုင်ခုံ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကိုတုပခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
Colace သို့မဟုတ် Dulcolax ပိုကောင်းသလား။
Dulcolax သည်အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုကို Colace ထက်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာထုတ်လုပ်သည်။ Colace သည်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးအဆင်မပြေမှုနည်းပါးသော်လည်းကယ်ဆယ်ရေးအတွက်သုံးရက်ခန့်ကြာနိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် Colace (သို့) Dulcolax ကိုသုံးလို့ရမလား။
စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (FDA) သည် Colace တွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဘေးကင်းမှုအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။ Colace သည်သန္ဓေသားပျက်ကွက်မှုအချို့နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးများသည်အန္တရာယ်များကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသည့်အခါ၌သာအသုံးပြုသင့်သည်။ Dulcolax သည်မလိုလားအပ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမတွေ့ရပါ။ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်များတွင်ကာလတိုအသုံးပြုရန်အတွက်အတော်လေးအန္တရာယ်ကင်းသည်။ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်ချုပ်နှောင်ကုသမှုကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းမညီမျှမှုအန္တရာယ်ကိုချိန်ဆသင့်ပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်အမြဲတမ်းတိုင်ပင်သင့်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်အရက်နှင့် Colace (သို့) Dulcolax ကိုသုံးနိုင်ပါသလား။
အရက်နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိသော်လည်းအစာခြေစနစ်သည်အရက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေနိုင်ပြီးအရက်ကိုသောက်စဉ် Colace သို့မဟုတ် Dulcolax ကိုသောက်သည့်အခါသတိထားသင့်သည်။
bisacodyl ပါ ၀ င်သည့် Dulcolax ဆေးများသည်ထိုင်ခုံပျော့ဆေးများမဟုတ်ဘဲ stimulant laxatives ဖြစ်သည်။ Dulcolax ကုန်သွယ်ရေးနာမည်အောက်တွင်ထိုင်ခုံပျော့ဆေးများရှိသည်။
တစ် ဦး ကမစင်ပျော့ပျောင်းအတွက်မစင်နှင့်ရေမျက်နှာပြင်တင်းမာမှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အစိုဓာတ်ကိုအူထဲသို့ချောမွေ့စေသည်။ Laxative သည်အစာခြေလမ်းကြောင်း၏ရွေ့လျားမှုကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ အစာခြေလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်ထိုင်ခုံကိုပုံမှန်အားဖြင့်ရွေ့လျားစေသည်။
နာတာရှည်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်အတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ထိုင်ခုံကိုပျော့ပြောင်းစေနိုင်သည်။ ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့် ၀ မ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းလက္ခဏာများကိုစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။
cialis နှင့် viagra ကိုတွဲသောက်နိုင်သလား
မင်းကတုပ်ကွေးbနဲ့ကူးစက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ